I-Casita Ejabulisayo Engasolwandle/I-Private Patio - I-Airbnb
I-Casita Ejabulisayo Engasolwandle/I-Private Patio
Los Ayala, Nayarit, i-Mexico
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Lin And Jim
U-Lin And Jim Ungumbungazi ovelele
I-Garden Casita ibukeka kahle kakhulu, inemibala futhi iwubuciko. Iwuhlelo oluvulekile olunosofa, isihlalo, ikhishi elinehhavini eligcwele, ifriji, i-blender, ibhodwe lekhofi, i-BBQ, i-patio yangasese nendawo yokungena. Igumbi lokugezela lineshawa evulekile. Kukhona umbhede omkhulu wase-Europe (noma amawele amabili) onezinto zokulala ezigoqene.
Ifenisha egoqwe ngezandla nezinto zendlu yokugezela ezipendiwe (ngisho ne-toilette!) zengeza ebuhleni baleli kamelo.
Ibhishi elingaphambili liyibhishi elinesihlabathi, eliphephile, lokubhukuda. Ama-Kayaks namabhayisekili ayatholakala ukuze asetshenziswe izivakashi njengezambulela zasolwandle, izihlalo namathawula asebhishi. Ibhishi yindawo enhle yokudla! Ama-muffins amasha, amakhekhe, ama-oyster, izinhlanzi ezincomayo, i-pineapple egcwele izithelo, ama-empanada, amantongomane, njll. konke kuyatholakala ukwengeza ekujabuleleni kwakho i-pueblo yethu encane yase-Mexico. Umuntu akakwazi ukulamba lapha!
Udokotela wokubhucunga umzimba uyatholakala esicelweni sezivakashi zethu sokubhucunga umzimba ekamelweni ngenani elinengqondo kakhulu namakilasi e-Yoga aseduze.
Kunezindawo zokudlela eziningana ezinhle kakhulu ebhishi yethu egxile ezinhlanzi ezisanda kukhiwa, izincomo ezinkulu, ama-tacos, ama-margaritas, i-piña colladas, nama-coconuts amasha. Ngaphezu kwalokho, i-pueblo yase-Los Ayala inezitolo eziningi zokudla nezikhumbuzo.
Amadolobhana ase-Rincon de Guayabitos nase-La Peñita angaphansi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo noma ngamatekisi ahlangene aqhele ngezakhiwo ezingu-4 kuphela. I-Puerto Vallarta ibanga lehora futhi amabhasi ahamba esuka e-La Peñita njalo emizuzwini engu-30. Amadolobhana okutshuza e-Sayulita nase-San Francisco (e-San Poncho) aqhele ngemizuzu engu-30. Amatekisi nawo ayaningi futhi awabizi kakhulu.
Kunezindawo eziningi ezithakazelisayo ongazihlola njenge-San Blas engokomlando,
i-Tepic, nama-Petroglyphs, Sinezinja ezintathu ezinobungane emagcekeni ethu futhi siyaziqhenya nabaxhasi be-Jaltemba Bay Animal Rescue (JBAR). Abathandi bezilwane ezifuywayo bamukelekile kakhulu!
Ukubhema kuvunyelwe kuma-patio ethu angaphandle.
Ikhaya liphinde libe nekamelo lokulala elilodwa elinombono ongu-180 degrees wolwandle, i- Vista Suite enhle kanye ne-studio suitie eyodwa etholakalayo, konke kunamakhishi aphelele, izindlu zokugezela, izindawo zokungena zangasese kanye nezikhala. Kukhona ama-kayak, amabhayisekili, ama-racquets e-tennis namagalofu atholakalayo kanye nezihlalo zasolwandle nezambulela. Imininingwane eyengeziwe iyatholakala uma kucelwa.
Woza futhi ujabulele i-puebla yethu encane yase-Mexico yase-Los Ayala etholakala amakhilomitha angu-60. enyakatho ye-Puerta Vallarta futhi ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka e-Rincon de Guayabitos nase-La Peñita), yonke ingxenye ye-Jaltemba Bay etholakala ogwini oluhle lwase-Riviera Nayarit! Woza futhi ujabulele imfudumalo yesimo sezulu sayo kodwa okubaluleke nakakhulu, imfudumalo yabantu bayo.
Ibungazwe ngu-Lin And Jim
Mina no-Jim sihlale sijabule ngokuxhumana nezivakashi zethu futhi sizisize zijabulele indawo yethu encane yepharadesi. Uma itholakala, siyakujabulela ukuthatha izivakashi zethu zivakashele indawo yethu njengendlela yokuya kumasevisi endawo, ukuthenga nezindawo ezithandwayo.
Mina no-Jim sihlale sijabule ngokuxhumana nezivakashi zethu futhi sizisize zijabulele indawo yethu encane yepharadesi. Uma itholakala, siyakujabulela ukuthatha izivakashi zethu zi…
ULin And Jim Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Los Ayala namaphethelo